अन्य फोटो भिडियो | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: अन्य फोटो-भिडियो
सीरियल नम्बर को एडोब फोटोशॉप सीसी। बोल्दै, हे, म साँच्चै उसलाई सधैँ छोड्न चाहन्छु
फोटोमा Exif कसरी हेर्नुहोस्
कसरी फोटो शोइक्सिफका लागि एक्सिफ हेर्ने त्यहाँ त्यहाँ धेरै धेरै प्रोग्रामहरू छन् जुन कि यो कसरी गर्ने जान्छन्, वा यसको लागि उद्देश्य राखिएको हो। जबसम्म पक्कै पनि तस्विर इन्टरनेटबाट लिइएको हुँदैन, त्यहाँ प्रायः एक्निफाइ हुँदैन।
मृतकको फोटोको कुन कोणमा कालो रिबन फाँट गर्नु पर्छ? र यो कहाँ स्पष्ट गर्न सकिन्छ?
मृतकको फोटोको कुन कुनामा कालो टेप झुण्ड्याउनु पर्छ? र यो कहाँ स्पष्ट गर्न सकिन्छ? स्पष्ट रूपमा तल दायाँ तिर ... टेप प्राय: तल दायाँ वा माथिको कुनामा (हामीसँग सापेक्ष) टुक्रिएको हुन्छ। यद्यपि ...
जीपी पावरबैंक द्रुत3फ्लैश सूचक लाई दुई मिनेट र रातो रातो रातो रातो रोशनी रोशनी। यो कस्तो छ?
GP PowerBank द्रुत char चार्जर सूचक दुई मिनेट को लागी रातो बत्ती जलाउँछ, र त्यसपछि blinks, के कुरा? सम्भवतः ब्याट्रीहरू अब काम गरिरहेका छैनन्। मसँग समान स्मृति छ। राम्रो काम गर्दछ। सूचक रातो छ ...
किन कम्प्यूटरले डिजिटल क्यामेरालाई देख्दैन?
किन मेरो कम्प्युटरले मेरो डिजिटल क्यामेरा देख्न सक्दैन? मलाई भन मैले USB मार्फत ल्यापटपमा डिजिक्याम घुसाएँ, यो भेटियो, तर यसले भन्छ कि फोल्डर खाली छ। सायद कम्प्युटरले क्यामेरा देख्दैन, किनभने एनएममा ...
कसरी चोरी चित्रमा जाँच गर्ने
कसरी चोरी चोरीको लागि जाँच गर्न के त्यहाँ अझै साहित्यहरू छन् चोरी बिना? यदि तपाईं लेखकबाट फोटो किन्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई स्रोत हेर्न सोध्न लाज लाग्दैन। सभ्य क्यामेरासँग प्रतिलिपिमा लेखकत्व रेकर्ड गर्न सक्ने क्षमता छ।
फ्लैश ड्राइवबाट तस्बिरहरू कसरी हेर्नु हुन्छ? nubuck मा
फ्ल्यास ड्राइभबाट फोटो कसरी हेर्ने? नोबकमा तपाई यसलाई मेमोरी स्लटमा घुसाउनुहोस् र नुबकमा हेर्नुहोस् - कुनै पाना छैन। नुबक एक प्रकारको छाला हो जुनबाट जुत्ताहरू बनेका छन् र फर्निचर ढाकिएको छ ...
जहाँ निःशुल्क डाउनलोड लाइटरूम रूसी संस्करण। कृपया लिंक दिनुहोस्।
जहाँ फ्रि लाइटरूम रूसी संस्करणको लागि डाउनलोड गर्ने। कृपया मलाई एउटा लिंक दिनुहोस्। cwer.ru एडोब फोटोशप लाइटरूम 4.1.१ पोर्टेबल रूसी संस्करण http://www.adobe.com/ru/products/photoshop-lightroom.html लाइटरूम मुफ्त डाउनलोड को लागी सिधा लिंक http://shareflare.net/download/29740.2884d448ca5eda324b7fb989fe9a/2kravv38। exe.html हो हो, त्यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस् ...
रोलिंग शटर के हो?
रोलि shut शटर भनेको के हो? यो शट लिनको लागि एक तरीका हो जब तस्विरका बिभिन्न भागहरू विभिन्न समयमा बेग्लाबेग्लै हुन्छन्, र एकैचोटि होइन। छोटकरीमा। हामीले एक उपकरण विकास गरेका छौं जसले यो प्रभावलाई पूर्ण रूपमा हटाउँदछ। ...
KROP के crope, एक कडा क्यामेरा, आदिमा के छ?
क्रप, क्रप क्यामेरा, आदिमा शट के हो? फोटोशोपर, मार्क (मार्क १-मार्क,, प्याडवाक होईन) - एक रिपोर्टरको क्यामेरा, पेशेवरहरूको लागि पूर्ण रूपमा सिर्जना गरिएको। र उनी काटिएको छ))) ...)
कसरी jpeg लाई फोटो रूपान्तरित गर्नुहोस्
कसरी JPEG मा फोटो रूपान्तरण गर्ने यदि मसंग पहिले नै प्रस्तुत छ र म JPEB ढाँचा भित्र यो अनुवाद गर्न आवश्यक छ, कहाँ बचत गर्न? यो पहिले कुन ढाँचामा छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ...
गम्भीर प्रश्न। के कसैलाई थाहा छ कसरी कम्पोजिट इनपुट कम्पोनेन्ट इनपुटबाट भिन्न हुन्छ? त्यहाँ समान छेदहरू पनि छन् ...
गम्भीर प्रश्न। के कसैलाई थाहा छ कसरी कम्पोजिट इनपुट कम्पोनेन्ट इनपुटबाट भिन्न हुन्छ? त्यहाँ समान छेदहरू पनि छन् ... म मेरो k कोपेकहरू थप्छु। कम्पोनेन्ट भिडियो गुणस्तर धेरै बढी छ। प्वालहरू - तपाईं आफैंलाई चिन्नुहुन्छ ...
तपाईंको कम्प्यूटरमा मानक प्रोग्राममा तस्वीरको साइज कसरी वृद्धि गर्ने?
कम्प्युटरमा मानक प्रोग्राममा तस्विरको आकार कसरी बढाउने? तस्विर खोल्नुहोस्, कलको साथ विस्तार गर्नुहोस्, प्रिन्ट स्क्रिन थिच्नुहोस्, पेन्ट खोल्नुहोस्, माथि बायाँ प्रेस INSERT बाट र अनावश्यक पुनःआकार चलाउनुहोस् ...
तस्बिर कस्तो वर्ष देखा पर्यो?
कुन वर्ष फोटोग्राफी देखा पर्‍यो? उनको आविष्कारले नयाँ विज्ञापन माध्यम र जन विज्ञापनको पहिलो प्रकारलाई जन्म दियो, जसमा प्रिन्ट पोस्टर, पत्रकहरू र अखबार विज्ञापनहरू समावेश थिए। लन्डनमा, ...
केम क्यामेरामा के हो?
क्यामेरामा आईएसओ के हो? फिल्मको संवेदनशीलता जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मानक (आईएसओ) को इकाइहरूमा अभिव्यक्त। समानता, उच्च संवेदनशीलता, फिल्ममा अन्न र ठूलो "आवाज" को घटना ...
प्रबुद्ध गर्नुहोस्: "कक्षा memory मेमोरी कार्ड" को मतलब के हो ?!
प्रबुद्ध गर्नुहोस्: "कक्षा memory मेमोरी कार्ड" को मतलब के हो ?! सुरक्षित डिजिटल (SD) र सुरक्षित डिजिटल एचसी (SDHC) मेमोरी कार्डहरूको लागि, विशेष विशेषताहरू गति विशेषताहरू - गति वर्ग (SD ...
HDR यो के हो?
HDR यो के हो? http://blyg.livej पत्रकार.com/22444.html HDR फोटोग्राफी मा एक नयाँ र फैशनेबल दिशा हो, यस प्रविधीले तपाईंलाई सबैभन्दा साधारण चित्रहरु पनि धेरै सुन्दर फोटो बनाउन को लागी अनुमति दिन्छ। HDR ...
सेल्फी के हो यो फ्रन्ट क्यामेराको माध्यमबाट आफैंको तस्विरहरू लिनु हो, ऐनाको माध्यमबाट वा आफैंमा लेन्सहरू पल्टाउँदा। क्रसबो यो एक निर्दोष केटी हो जसलाई प्रेम थाहा छैन! ) ...
मलाई कसरी तस्विर लिन सकिन्छ भन्नुहोस् ..
मलाई भन्नुहोस् कसरी सही तस्विर लिने .. मुख्य कुरा, तनाव नगर्नुहोस्! यो आवश्यक छैन GOST 32843-2004 मा "कालो र सामाजिक नेटवर्कहरूको लागि केटीहरू र महिलाहरूको तुच्छ तस्वीरहरू" मा। GOST बाट अंश: २.2.6। मोडेलले ...
म मेरो फोटोमा चश्मा राख्न चाहन्छु, मलाई कार्यक्रम बताउनुहोस् ... फोटोशप बाहेक
म मेरो तस्विरमा चश्मा राख्न चाहन्छु, मलाई प्रोग्राम बताउनुहोस् ... फोटोशप बाहेक। मेरो उत्तर यहाँ हेर्नुहोस्: http://otvet.mail.ru/question/55959991/ जिम्प, रंग। होईन, प्रोग्रामहरू "स्टाइलिस्ट", आदि। सुपरगुमा पनि सम्भव छ। मलाई थाहा छैन .... ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2पृष्ठ3अर्को पाना
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,492 प्रश्नहरू।